Frantsa · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Frantsa · Marsa, 2011
Tantara mikasika ny Frantsa tamin'ny Marsa, 2011
Hollaback!Fampiasaina finday hisorohana ny herisetra eny an-dalambe
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana28 Marsa 2011
Tranga tsy mbola fahita tany aloha ahafahana mampitsahatra herisetra ara-nofo eny an-dalam-be ny fisian'io "fipoahana teknolojia teo amin'ny finday io". Namporisika ny vehivavy manerana izao tontolo izao mba hampiasa an'ireo fitaovana eo am-pelantanan''izy ireo ireo io tetikasa io mba ahafahan'izy ireo mizara ny tantarany, manao tatitra sy mamaritra ny toerana...
Frantsa : Fanahiana sy fanantenan'ny vondro-piarahamonina Japoney
Azia Atsinanana17 Marsa 2011
Niteraka ahiahy tamin'ny ankamaroan'ny Japoney monina ivelan'ny tanindrazany, na izany eto Frantsa na any an-toeran-kafa, ny mahita sary mampihoronkoditra ny tsunami sy ny vaikany. Nanao izay hifandraisana amin'ny havany noho ny fisian'ny aterineto ry zareo ny tontolo andron'ny zoma 11 marsa
Meksika: Raharaha fakàna an-keriny niantraika tamin'ny fifandraisana ara-diplaomatika amin'i Frantsa.
Amerika Latina01 Marsa 2011
Meksika sy Frantsa dia manana olana lehibe ara-pifandraisana diplaomatika noho ny fanamelohana ny fakana an-keriny natao-na teratany Frantsay tao Meksika. Florence Cassez no anarany, ary voasambotra tamin'ny taona 2006 izy, nampangaina ho nanao fakana ankeriny ary voasazy 60 taona an-trano-maizina. Ny sakaizan'i Cassez dia mpitarika andian-jiolahy antsoina hoe “Los Zodiacos” (midika...